Webhusaiti SEO Inosimudzira Na Semalt
(pane imwe nhandare yakaitwa naSemalt nyanzvi)
Kwete kare kare, iyo Webhu Webhu yaingova nzvimbo iri nyore yekuwana ruzivo. Asi zvese zvachinja. Nhasi, Network yakave chishandiso chine simba chekusimudzira bhizinesi. Zvinyorwa zvemapepa, nhepfenyuro, uye kunyange terevhizheni zvakarasikirwa nezvavaimboita. Kune vanhu vanotenga mapepanhau. Kuchine vateereri kumaredhiyo. Mari inoiswa muzvishambadziro zveterevhizheni, asi munhu wese anonzwisisa kuti nguva yasvika yekuti uwane chokwadi chepamhepo. Ikoko vanhu vanoita mari uye vanogadzira bhizinesi rakabudirira.
Nguva itsva yatosvika
Radical change in the worldview inoitika pamberi pedu chaipo. Kune anowedzera uye akawanda vafambisi vekufambisa iyo World Web. Tekinoroji nyowani dziri kukura padanho rimwe chete. Iwe unogona kuwana Network kuburikidza ne smartphone yako - tarisa vhidhiyo, verenga nhau kana ... tenga blouse idzva. Kubhadharira zvinhu online zviri nyore. Munhuwo zvake anogona ikozvino kushanyira online online shopu, achidzungaira pane chigadzirwa gallery, uye kubvunza mubvunzo wavo. Chero munhu anogona kugamuchira mhinduro yekukasira nekuti mhinduro ndiyo yakakosha mamiriro ehunhu hwevatengi. Iyo internet yave iri musika maunogona kutenga zvese, uye panguva imwecheteyo zvine simba kushambadzira chishandiso. Iyo hupfumi hwehupfumi hwezvitoro zvepamhepo zvinosimbisa zvakanakira zvekushandisa zvewebhu. Ivo vanogona chaizvo kubatsira varidzi vesaiti zvakanyanya kuwedzera mari.
Kusimudzirwa kwewebhu ndekwechokwadi kune chero chitoro kune avo vangangoita vatengi vari kutsvaga masevhisi kana nhumbi munzvimbo iri pachena. Vazhinji vavashanyi vako vanhu vakapfuma. Yakawanda yevanogona kutenga vatengi vari kutsvaga zvinhu zvako, asi ... tsvaga zvigadzirwa zvevadzivisi. Sei? Izvo zvakaitika pasi pezuva mune webhu zvinokambaira zvinyorwa nekuti ivo vaive vagonesa zviwanikwa zvavo zveInternet pamberi pako chaipo. Mumwe anogona kudzinga kunze uye anotsiva vakwikwidzi? Hongu, kana yekuisa webhu kukurudzira kune Semalt nyanzvi.
Kuenda kunzvimbo dzekumusoro
Wese munhu akavhura chitoro anoziva kuti chii kutengesa munzvimbo yakasarudzika yeguta. Mutengi anogamuchira yekutanga kufungidzira kwebhizinesi rako usati washanyira. Ivo vanotarisa kero yechitoro uye vanoongorora mukurumbira wayo pane subconscious level. Kambani, iri pakati peguta, iine vashanyi vakawanda nevatengi vakapfuma, iri kubudirira. Vapfumi vatengi vanomhanyira kwauri. Mutemo uyu unoshanda kwete chete kumasangano ekutengesa. Nzvimbo dzekusimbisa muviri, nzvimbo dzekutsidzira, spas zvakare zvinoteerera mitemo yekuremekedzwa, kungofanana nemasupamaketi kana maboutique. Zvinokushamisa iwe here kuti paPasirese Webasa-vanhu nehana kana nekuzvinyararira vanovimba nepfungwa dzakafanana nezve mukurumbira? Kana iwe uri pamusoro pegumi, yako pfuma inoonekwa seinokudzwa uye inochengetedzwa.
Sezvimwe muchitoro chisina nzvimbo, nzvimbo yakanaka munzvimbo chaiyo inokwezva vatengi. Kana iwe ukaonekwa mune yepamusoro yekutsvaga mhinduro, 95% yevanogona kutenga vatengi vanokuteerera iwe. Sezvinoratidzwa nehuwandu, zvikamu zviviri kubva muzana zvevaya vari kutsvaga vanotsungirira kusvika kune yewebhu peji rekutsvaga. Kusiyana nechitoro chisiri pamhepo, kusvika pazvinzvimbo zvepamusoro hazvidi kuti zviwedzere mari yakawanda seyakakodzera chirongwa chebudiriro. Pano iwe haufanirwe kuwana isiri inotaridzika mukuru kubva kumaneja manejimendi, asi ane ruzivo nyanzvi. Masevhisi avo anofanirawo kubhadharwa, asi muripo wakaderera kwazvo pane mutengo wekurenda munzvimbo ine mukurumbira yedhorobha. Asi kunyangwe chitoro chinotengesa mukati meguta rekufungidzira hachizokwezva vateveri vazhinji kubva kudzimwe nyika dzakasiyana senzvimbo yepamusoro muGoogle SERP.
Chii chinonzi mutengi?
Kupa kuongororwa kwakawanda kwechitoro chepamhepo uye kukoshesa zvipi zvinofanirwa kuitwa zvakanyanya, iyo nyanzvi yeSEO inofanirwa kuongorora zvinhu nemasevhisi. Panguva ino, chirongwa chekusimudzira bhizinesi uye chirongwa chakazara chebasa chinoumbwa. Ngatitarisei kune imwe yeanobudirira Semalt kampeni - Insignis , imba yekushongedza chitoro kubva kuRomania. Inotengesa zvigadzirwa zvemukati nekushandiswa kwekunze (fenicha, marambi, midziyo yekicheni, zvigadzirwa zvemakenduru, nezvimwewo). Iyo kambani inopa yakakura-mhando sevhisi uye nekukurumidza kuendesa zvigadzirwa mumadhorobha nemaguta ese enyika.
Kuonekwa kwakawanda kweye www shop yeakakwira-frequency, pakati, uye yakaderera-frequency mibvunzo yakaongororwa. Panguva imwecheteyo, iyo Semalt nyanzvi yakadzidza iyo profiles yevakwikwidzi uye vatengesi-vatungamiriri kuti vazive zvakanakira ivo. Iyo yaive yakatemwa maitiro eayo anotungamira mawebhusaiti mumunda uye yavo yekubatanidza faira, pamwe nemifungo yakawonekwa yekukwiridzira kutakura mapeji ewebhu. Padanho rekutanga, Semalt pro inozo tsvaga kuti saiti yacho inoda kuvandudzwa kwakawanda. Mukupedzisira, mumwe anogona kukurudzira kuvandudza mune saiti mamiriro - dhizaini, kufamba, nzvimbo uye zvirimo zvemashoko anovharira, kugadzirwa kwemapeji matsva ewebhu.
Padanho irino ramushandirapamwe reSEO , zvakakodzera kufunga kana uchinge uchishandura CMS, kugadzirisa saiti kune nharembozha, nyorazve http kune https, nezvimwewo. Iko kudikanwa kwekuvandudza kwakawanda kunokurukurwa pamwe nemutengi zvisati zvaitika, panguva yekuita bhajeti rekusimudzira webhusaiti.
Tsvaga Query Core
Panguva ino, SEO pro inounganidza, mapoka uye inosarudza kuwanda kweiyo semantic core. Mukuwirirana nefomati ye www-chitoro, iyo semantic yakakomba inogona kusanganisira kubva kumazana mashoma kusvika mazana ezviuru zvemibvunzo yekutsvaga. Iko kugadzirwa kwepakati kunogona kutora mwedzi yakati wandei, saka izvi zvinoitwa pamwe chete nemamwe mabasa. Panyaya yeInsignis, isu takasarudza kusimudzira kanzuru yakafanana-mazwi epeji repamusha, chikamu chechigadzirwa, pamwe nemiswe mirefu mirefu ine masiteki ari pamusoro 100. Mwedzi miviri mushure mekutanga kwekusimudzira, takawedzera mamwe mapoka maviri .
Yakaenzana mamiriro esaiti
Chero chero saiti yakafanana nemuti pane iyo trunk iri peji guru, uye zvikamu uye zvitsauko matavi nemashizha. Kureba kwacho kuchaita sei kunoenderana nemhando uye rudzi rwesaiti. Iyo saiti-peji peji yatove nemuti wehuni kubva kune iyo nzira dzakasiyana siyana dzinogona kukura. Insignis, kufanana nezvose zvitoro zvepamhepo, ine yakanyanya kuomarara uye mizhinji-chikamu dhizaini. Kune rimwe nerimwe boka remibvunzo yekutsvaga, iwe unofanirwa kuseta nekukwiridzira peji rekutsvaga. Izvo zvakakosha kuyeuka kuti kune yakaderera-frequency queries, zviri nani kufambisa peji rezvigadzirwa. Kune yakakwira-frequency queries, ekisheni dzimba dzinovakirwa.
Kufuridzirwa kwekutsvagira matsamba ewebhu kunobuda munguva yekuongorora kutsvaga kwekutsvaga kwevanokwikwidza, pamwe chete nezvinhu uye huwandu hwebasa. Kune makuru mawebhu-shopu ane nzvimbo dzekuparadzira mumaguta akasiyana, seInsignis, misika uye brand nemahofisi anobatana, iyo nhamba yemapeji ekutora inowanda nehuwandu hwemaguta. Zvemukati zvemapeji akadai webhusaiti zvinofanirwa kuve zvakasarudzika. Mumapurojekiti mahombe, matsva ewebhupeji mawebhusaiti anogadzirwa kunyange kwemakore maviri kubva pakatanga kusimudzirwa kwesaiti. Kuti uwane mhedzisiro yaunoda, iyo huru basa pakuwedzera webhusaiti yekugadzira inofanirwa kuiswa nekukurumidza sezvinobvira.
Yemukati optimization zvinangwa
Nyanzvi inogadzirisa zvikanganiso zvewebsite wepamhepo optimization, inoshanda neyekutarisa mawebhu emapeji ebvunzo, inobvisa zvakapetwa mapeji. Kuti uite izvi, tekinoroji SEO yekuongororwa kwenzvimbo inoitwa pane iyo iro iro basa rekunze kwemukati rinoumbwa. Panyaya yeInsignis, mumwe akagadzirisa zvikanganiso obva aenderera kugadzirisa matambudziko akakosha anoonekwa nenzira yehunyanzvi hwekuongorora.
Mumwe anofanirwa kuita mabasa anotevera:
kuwedzera meta tags epaji peji uchishandisa yakakodzera vhoriyamu kiyi-mazwi;
kuisa pamhepo yekumhanya kwema server uye kurodha mapeji esaiti;
kubvisa zvakaputswa zvinongedzo;
kugadzirisa zvese 404 zvikanganiso uye kuve nechokwadi kuti ma URL ese akakwana;
kuseta yakarongeka data yemunharaunda Bhizinesi mhando uye kugadzirisa dhizaini pane zvigadzirwa dzimba;
kubvisa kudzokorora kwe URLs uchishandisa kugara uchidzokorora, canonical kero, noindex inotevera;
kugadzirisa marobhoti.txt kuitira kuvhara mabhagi anodiwa uye kudzivirira kutarisisa kwemapeji akasiyana-siyana ekugadzirisa uye peji rekutsvaga;
kugadzira iyo XML saiti mepu;
kunyora yakasarudzika SEO zvemukati makuru uye chikamu mapeji uchishandisa yakakodzera mazwi-mazwi;
kusanganisa yakarasika alt tag kune mifananidzo kuburikidza auto-chizvarwa.
Izvo zvakakosha kwete kungoisa yekumhara mapepa ewebhu asi kuti uite yekubatanidza yemukati kuitira kuti vatengi uye yewebhu spider vagone kusvika kune mamwe mapeji ewebhu. Kunze kwekunge izvi zvaitwa, vangangodaro vasingabudi mune iyo index yewebhu vanopamba. Iyo SEO nyanzvi inovaka iyo yekubatanidza yemapoka emhando nekubatsirwa kwezvinyorwa zvakagadziridzwa, kwavanowedzera zvakambounganidzwa pamwe nekubatanidzwa mibvunzo, chinotamisa huwandu hwehupfumi kubva pamakwikwi akadzika emapeji ewebhu kuenda kumapeji ehupamhi hwe nesting.
WWW chengetedza Kugadziriswa kwemukati
Iyo optimizer pamawoko inogadzira yakasarudzika meta tags uye H1 misoro yakavakirwa pane "refu muswe" wekutsvaga zvikumbiro kune ayo ewebhu peji panodiwa. Zvakare, yemapeji akasimudzirwa pane iyo www chitoro, zvinyorwa zvinoumbwa zvinosanganisira zvakambounganidzwa mibvunzo yakakosha, pachena, uchifunga nezvezvino zvikumbiro zvewebhu zvinokambaira. Mavara anokanganisa ese ari maviri mapeji anotariswa nemhando yepamusoro-frequency mibvunzo uye kuratidza kwerefu-muswe mibvunzo. Panyaya yeInsignis, imwe yakakwanisa kusvika pamireza yepamusoro yeiyo main key-mazwi, uye kune ese miswe mirefu kuti ipinde pamusoro pe100. Pamusoro peiyo huru peji rewebhu uye zvikamu zvekutanga, iwo mapeji anotevera akagamuchira chikamu chikuru che traffic - marambi / marambi / zvinhu zvekushongedza / zvigadziko.
Iyi ndiyo nhamba yakakwana yemapeji ezvigadzirwa iyo Google yekutsvaga marobhoti inogona kukamba kune yakatarwa nguva yenguva. Zvinokurudzirwa kuti vashandi vane ruzivo chete vashande nebhajeti yekukamba. Iyo nyanzvi inovhara "marara mapeji" akagadzirirwa kugona kwevatengi chete, anorambidza vashambadzi vewebhu kubva kushanyira "marara mapeji" uye anovhara nzira kwavari.
Webhusaiti Kubatsira Kusimudzira
Ko webhu inokambaira algorithms inofunga nezve maitiro maitiro? Vanoita. Ndokusaka SEO-pros inoshanda pazvinhu zvakadai se:
kusadzoka-kwemutengi kuchiratidziro chekutsvaga;
kuderera kwehuwandu hwekubhururuka;
wedzera nguva inoshandiswa pane peji rewebhu.
Kugadziriswa kweiyo www shopu yemidziyo yemafoni ichawedzera pachena kuoneka kwenzvimbo mumhedzisiro yekufambisa. Izvo zvinotungamira kune kushandurwa kwepamberi kubva kune zvigadzirwa zvefoni. Yakareruka yekufambisa yakadzika mapepa emabhiza. Iyo yakakodzera dhizaini ye "About Us" peji ichaita kuwedzera kuvimba kwevashanyi uye webhu zvinokambaira.
Kunze kwewebhu webhusaiti
Izvi zvinobatsira pazvinhu zvipi? Izvi zvinobatsira kune aya masayiti anoshanda munharaunda inokwikwidza zvikuru. Mune dzimwe nzvimbo dzemakwikwi akaderera, iwe unogona kuita pasina kugadzira zvinopinda zvinopinda. Asi kune mazhinji mawebhusaiti, kugona kwekunze hakugoneki. Nzvimbo dzakakoshesesa dzakakomberedza dzinokuisa kwauri, iwe unonyanya kuvimbika paunenge uri "mumeso" evashambadzi vewebhu. Kune akawanda ma paramita ayo ayo munhu anofanirwa kuvaka link yekubatanidza uye sarudza vanopa.
Kuwedzera kushandurwa kubva kune vashanyi kune vatengi
Iyi nhanho yekusimudzira webhusaiti inoda ruzivo rwekugadzira, usability, email kushambadzira, uye kunyangwe hunyanzvi mukugadzira yakakwirira-mhando zvirimo. Iyo SEO nyanzvi pano inoita zviito zvinotevera:
inowedzera algorithms yemaneja-kune-maneja kutaurirana;
inoshandura iyo mavara ezvinyorwa zvewebhu peji;
inogadzirisa inokonzeresa munhu zvinyorwa zvemashoko.
Uye aya angori mazana zana ekuvandudzwa ayo anowedzera kushandurwa kwenzvimbo. Kana zvasvika pakubudirira kweInsignis, imwe yemashoko makuru-mazwi eiyi kambani yakatora nzvimbo yekutanga mune ye TOP-10. Rimwe kiyi-izwi (yerudzi rwekutanga) rwatosvika TOP-3. Kubudirira kwekutengeserana kwepamhepo haisi pfungwa yakaoma. Inogona kutaurwa muzvokwadi. Kubudirira kwemushandirapamwe weSEO wekambani ino yeRomania kwemwedzi mitanhatu inoratidzwa muhuwandu hunotevera: 232-mazwi-makuru ari mune TOP-1, uye 1136-mazwi-makuru ari mune TOP-TEN (achienzaniswa nezviratidzo pamberi pekanzuru. - 4 na 55, zvichiteerana). Mumwedzi yekutanga, huwandu hwevanhu vanotsvaga zvigadzirwa izvi kuburikidza nekutsvagisa organic hwawedzera neanopfuura chiuru. Mumwe anogona kuona yakawedzerwa mari uye zvirinani kuzivikanwa chiratidzo. Iwe unoda here kuti mapeji ese pane yako saiti anyorwe nekukurumidza? Semalt achasarudza yakanakisa SEO kukurudzira zano iwe.